Kuvimbiswa kwemhando yepamusoro - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Isu tinotenda zvakasimba kuti kumberi kwekupedzisira kwechigadzirwa ndiko kukoshesa kwekutonga kwemhando yepamusoro. Kubudikidza neIPQC sisitimu yekutanga kuongorora, maitiro ekuongorora uye kuongorora kwekupedzisira, mhando yegadziriro yekugadzira inogona kudzorwa uye nekuvandudzwa kuve nechokwadi chekupfuura nepakati peyero yezvigadzirwa;
Kuti tidzivise kubuda kwezvisina kukwana zvigadzirwa, isu tinogadzira maitiro ekuongorora (FQC) kuita batch kuongorora pazvigadzirwa zvinogadzirwa nenzira imwechete uye muchina mumwe chete, uye zvigadzirwa zvinogona kuendeswa kune inotevera maitiro mushure mekunge vakwanisa ;
Tisati tachengeta, isu takamisa rakapedzwa chigadzirwa chekuongorora timu (OQC, QA) kuita zvese-kutenderera kuongorora pane zvigadzirwa. Tisati tasununguka, tinoita sampling kuongorora pazvinhu zvinogoneswa, kuti tione kuti zvigadzirwa zvinofanirwa kunge zviri munzvimbo inokodzera kana zvatumirwa kunze kuzadzisa zvinodiwa nevatengi.
Nekuda kuona mhando yezvigadzirwa, Jixin akateedzana akatenga akakwenenzverwa ekuyedza maturusi senge mufananidzo, maviri-eenzvimbo altimeter uye cubic element, ndokumisikidza chaiyo yekuona nzvimbo, iyo yakazadza kufukidzwa kuzere kwekuwanikwa kwechigadzirwa kubva pahukuru kuyerwa kuita basa. kuonekwa.
Isu tinogara tichitevedzera musimboti wekupa vatengi neyakanaka mhando zvigadzirwa pane inonzwisisika mutengo. Isu tinodzora mhando yechigadzirwa nekubatanidza "kudzivirira" uye "kuongorora", inopa yakachengeteka uye yakavimbika mhando yekudzora tekinoroji yekugadzira, kuperekedza CNC chaiyo machining, kunyatso kukanda uye kutsika kugadzira, uye kupedzisa chako chekuisa.
Dzidzo uye kurovedzwa ndiyo yakanakisa nzira yekuona kuburitswa kwematarenda. Isu tinogaro bata misangano yemhando yepamusoro uye misangano yemhando yepamusoro yekuvandudza hunyanzvi hwevashandi vehunhu, kugona tekinoroji yazvino uye kusangana nezvinodiwa zvehunyanzvi zvemaposi akasiyana.
Hunhu hwakanaka hunhu hwakanaka, mhando yakanaka ndiko kutsvaga kweWally senguva dzose!